Mari inonyanya kuvimbiswa yedhijimusi muna 2022. Mari yakawanda inobhadhara mari yekutsvaga, inokura nokukurumidza kudhinda mari yekuda kutenga ikozvino.
Nhamba yepamusoro yepamusoro gumi yakawanda yemari yemadhini, iyo yakakura mukukosha mumwedzi wapera.
Mari inobhadhara mari yakawanda
Percentage growth for a month
Secret (SCRT) 131.44 %
Fantom (FANTOM) 110.09 %
NEAR Protocol (NEAR) 96.97 %
Oasis Network (ROSE) 94.42 %
Cosmos (ATOM) 72.06 %
Syscoin (SYS) 65.65 %
Velas (VELAS) 53.15 %
Chromia (CHR) 52.14 %
Flux (FLUX) 42.69 %
Kava (KAVA) 38.40 %
Iyo inonyanya kuvimbisa digital mari ndeye cryptoratesxe.com webhusaiti webhusaiti inoratidza iyo yepamusoro mari yemadhora ine zvakakwana purofiti mumwedzi mitatu yadarika.
Iyo webhusaiti yepamhepo Yakawanda yakavimbisa mari yemadhini inoshandisa yakavhurika masosi kubva kune digital mari exchanges uye inogadzira chiyero chekuvimbisa mari yemadhora maererano neyechokwadi-nguva yekudyara.
Iyo inovimbisa digital mari inotarisirwa saka kana ichiratidza yakagadzikana uye inogara ichikura mukukura. Zvichienderana nesimba rekusakura, kusimba kwekukura kwayo uye saizi yemubhadharo wakawanikwa kubva mukudyara mu crypto currency, isu tinouyanisa uyu TOP muyero.
Anonyanya kuvimbisa mari yemadhora 2022
Iyo inonyanya kuvimbisa mari yemadhora ye 2022 ndeye yedu yemahara yepamhepo webhusaiti webhusaiti inoratidza inonyanya kuvimbisa mari yemadhora ye 2022.
Sarudzo yekuvimbisa iyo crypto inoenda mu 2022, asi isu tinoongorora mwedzi mitatu yekupedzisira yemari yekusandudzika kwesimba. Chiyero chekuchinjana uye masimba ehuwandu anoshanduka zuva rega rega uye saka chiyero chedu chepamusoro che "Yakawanda yakavimbisa mari yemadhini 2022" inogona kuchinja zuva rega rega.
Kukura mari yemadhora ine yakanyanya purofiti.
Kukura mari yemadhora ine yakanyanya purofiti - muenzaniso wevose mari yemadhora zvinoenderana nesimba ravo. Kukura mari yemadhora ine upamhi purofiti inoongororwa nesu kuenzanisa yepamusoro yepamusoro yezvinonyanya kuvimbisa mari yemadhora.
Isu tinosarudza kubatsirwa kweiyo crypto nenguva, shanduko yehuwandu hwayo mumwedzi mitatu yadarika.
Iyo yepamusoro purofiti ye digital mari inongofungidzirwa - yakawanda sei imwe neimwe digital mari yakakwira mumutengo panguva yakaongororwa.
Iyo inonyanya kubhadhara mari yemadhora ndeye basa redu, iyo yepamusoro ye online rating ye mari yemadhora iyo inounza huwandu hwepundutso kana iwe ukavatenga uye uchitengese mushure menguva yakati, i.e.iyo inonyanya kubhadhara.
Iyo yepamusoro yeinobatsira kwazvo crypto inoverengwa mumwedzi mitatu, asi iwe unogona kuiongorora mune imwe nguva yenguva.
Inobatsira crypto inokosheswa zvakanangana nedhora reUS. Isu tinofungidzira kuti takatenga crypto yedhora reUS, uye mushure mechinguva takazvitengesa nemadhora. Ndeipi digital mari inogamuchira yakawandisa mari mune iyi kesi ndiyo inonyanya kubatsira digital mari.
Tafura yeiyo inobatsira kwazvo mari yemadhora.
Tafura yeiyo inobatsira kwazvo mari yemadhora - zvichionesa ratidziro yedu yepamusoro yeinonyanya kubhadhara crypto.
Mune tafura yeiyo inonyanya kubhadhara crypto unogona kuona zita reiyo digital mari uye kukura kwayo mwero muzana pamwedzi.
Paunotarisa pane imwechete inobatsira kwazvo mari yemadhora patafura, iwe uchaona kuwedzera kwakawanda pachiyero cheiyi crypto mwedzi wapfuura.
Chati yemakristini anobatsira kwazvo.
Iyo inonyanya kubhadhara digital mari chati ndeyimwe online yepamhepo yekushandisa iyo inoratidza yepamusoro yepamusoro yeinonyanya kubhadhara mari yemadhora.
Iyo chati yemabrocurrencies anobatsira kwazvo inoratidza masimba emitengo yeiyo gumi yepamusoro-soro purositi.
Kuti ive nyore kunzwisisa, iyo mifananidzo yemakristani akasiyana anoratidzwa mune akasiyana mavara.